Ikhaya leSmart - Pandawill Technology Co., Ltd
Ukuzenzakalela kwasekhaya ukunwetshwa kwendawo yokuhlala okuzenzakalelayo kokwakha. Kuyinto ezenzakalelayo yasekhaya, umsebenzi wasendlini noma umsebenzi wasendlini. Ukuzenzakalela kwasekhaya kungabandakanya ukulawula okuphakathi kokukhanyisa, i-HVAC (ukushisa, ukungena komoya nomoya opholile), izinto zikagesi, izingidi zokuphepha zamasango neminyango nezinye izinhlelo, ukuhlinzeka ngokuthuthuka okuthuthukile, ukunethezeka, ukusebenza kahle kwamandla nokuphepha. I-automation yasekhaya yabantu asebekhulile nabakhubazekile ingahlinzeka ngekhwalithi eyengeziwe yempilo kubantu abangahle badinge abanakekeli noma ukunakekelwa kwezikhungo.
Ukuthandwa kwe-automation yasekhaya kukhuphuke kakhulu eminyakeni yamuva ngenxa yokutholakala kwemali ephakeme kakhulu nokulula ngokuxhuma kwe-smartphone nethebhulethi. Umqondo we "Inthanethi Yezinto" uhlobene eduze nokwandiswa kwemishini ezenzakalelayo yasekhaya.
Uhlelo lokuzenzakalela lwasekhaya luhlanganisa izinto zikagesi endlini zodwa. Amasu asetshenziswa emishini yasekhaya afaka phakathi ekwakheni i-automation kanye nokulawulwa kwemisebenzi yasekhaya, enjengezinhlelo zokuzijabulisa zasekhaya, ukufakelwa kwendlu nokunisela igceke, ukondla izilwane, ukushintsha "izigcawu" zokwenza imicimbi ehlukile (njengokudla noma amaphathi) , kanye nokusetshenziswa kwamarobhothi asekhaya. Amadivayisi angaxhunywa ngenethiwekhi yasekhaya ukuvumela ukulawula ngekhompyutha yomuntu siqu, futhi angavumela ukufinyelela kude kusuka ku-inthanethi. Ngokuhlanganiswa kobuchwepheshe bolwazi nemvelo yasekhaya, amasistimu nezinto ezisebenza ngogesi ziyakwazi ukuxhumana ngendlela edidiyelwe okuholela ekutheni kube lula, ukusebenza kahle kwamandla, kanye nezinzuzo zokuphepha.